umbuzo 748 panel / VC
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #104 by Gh0stRider203
Ndiye Ndajonga macala onke kwaye ndiye KODWA ukufumana kwiphaneli freeware onesidima okanye moya virtual ndikwazi ukuyifaka kwi 748F ukuba ziphaphazele (ndiza kuya hluleka ukuba ikhonkco kamva lol).
lowo ke kufuneka usebenzisa i 747 panel engagqibekanga leyo hey nantoni na, iyasebenza ... kodwa eneneni Ndingathanda ukufumana VC endilisekileyo. UKHUTSHIWE, baqhele siphaphazela lenjongo 2d kodwa eh VC nice ngoku yaye emva koko xa efika ukuphuma kwelanga ezintle okanye kwelanga ngaphambi kwakho
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #112 by aputech
Gh0st, khangela phezulu cockpits Ken Wigginton kaThixo. Ndaba nengxaki, efuna i 2D / VC moya ngcono, yaye uye wenza abantu eziliqela elungileyo kakhulu, yonke into iBoeing kunye Airbus ngokufanayo.
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #116 by Gh0stRider203
Ndiza khangela koko .... enkosi.
Ixesha ukwenza page: 0.155 imizuzwana